Wariyaha Idaacada Ganacsiga ee FM | Gudbinta Raadiyaha ee Xarunta Raadiyaha | Jumlada Gudbinta Fm
Qaybinta Fiidiyowga ee Ip-ka waxa loo isticmaali karaa Goobo dhowr ah oo ay ku jiraan
* Istuudiyaha baahinta
* Farsamooyin badan iyo sawiro soo saarid kadib
* Sawirka caafimaadka
* Tafaariiqda calaamadaha dhijitaalka ah ee dukaamada iyo suuqyada
* Qolalka kantaroolka iyo xarumaha taliska
* Wadaagista muuqaalka iyo tababarka shirkadda
Adeegayaasha fiidiyoowga ah ee shabakada, oo sidoo kale loo yaqaanno server-yada fiidiyowga IP, waxay awood u siinayaan wareejinta quudinta fiidiyowga ee adeegayaasha kale ee fiidiyowga / PC-yada ama waxay u gudbiyaan durdurrada ciyaarta tooska ah (iyada oo loo sii marayo IP interface ama SDI). Tusaale ahaan, ilaalinta, server-ka fiidiyowga IP-ga waxaa loo isticmaali karaa in kamarad kasta oo CCTV loo rogo kamarad ammaanka shabakadeed oo leh fiidiyoow ku salaysan IP oo awood u leh in lagu sii daayo shabakad IP ah.
Nidaamka matrix-ga fiidiyowga ee IP-ga wuxuu u oggolaanayaa in fiidiyooga la qaybiyo, la kordhiyo, oo lagu qaabeeyo shabakadda IP-ga, mid-saarista ama isku-dhufashada calaamadaha fiidiyoowga shakhsi ahaaneed ee muraayadaha muraayadaha iyo soo bandhigida nuxurka fiidiyowga ee shaashado badan oo fiidiyoow ah. Tani waxay siinaysaa isticmaalayaasha tiro aan xadidnayn oo qaabaynta qaybinta fiidyowga gaarka ah. Waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa codsiyada sida baahinta, qolalka kantaroolka, qolalka shirarka, daryeelka caafimaadka, warshadaynta, waxbarashada, iyo in ka badan.
Video-over-IP encoders waxay u beddelaan calaamadaha is-dhexgalka fiidiyowga sida HDMI iyo analog ama calaamadaha maqalka ee ku dhex jira durdurrada IP iyagoo isticmaalaya hababka isku-buufinta caadiga ah sida H.264. FMUSER waxay bixisaa xalal kuu oggolaanaya inaad ku gudbiso fiidiyoow tayo sare leh shabakadda IP-ga caadiga ah si aad u muujiso nuxurka HD ee hal shaashad - ama calaamado badan oo muuqaal ah - fiiri FBE200 H.264 / H.265 Encoder bogga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Video-over-IP decoders fidiyo fiidyaha iyo maqalka shabakad kasta oo IP ah. FMUSER waxay bixisaa xalal heli kara muuqaal tayo sare leh oo ku saabsan shabakada IP-ga caadiga ah sida H.264/H.265 Decoders. Sababtoo ah cod-bixiyehu wuxuu isticmaalaa isku-buufinta H.264 wuxuuna u baahan yahay xajmigoodu aad u hooseeyo, aad buu u hufan yahay marka la dejinayo fiidiyoow HD buuxa ah iyo maqal analog ah. Waxa kale oo ay taageertaa codaynta maqalka ee AAC, markaa calaamada maqalka waxaa lagu keeni karaa xajmi yar laakiin tayo sare leh.
Heerarka Fiidiyowga-ka-badan-IP iyo Tixgelinta Qaybinta Fiidiyowga
Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha la qaadanayo marka la tixgelinayo qaybinta sawirka xallinta sare ee mashruucaaga:
Haddii aad rabto in aad ku shubto ilaa video HD, raadi alaabooyinka taageeraya qaraarada 1080p60 iyo 1920 x 1200 kaliya. Taageerada xallinta sare waxay macnaheedu noqon kartaa isticmaalka xajmiga xajmiga iyo kharashka sarreeya, inkastoo tani aysan run ahayn dhammaan xalalka.
Wax ka baro nooca isku-buuqa ee la isticmaalo, maadaama codecyada gaarka ahi aad ugu kala duwan yihiin qiimaha. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad tixgeliso cod-bixiyeyaal/qalab-dejiyayaal isticmaalaya koodh-qiimo sarreeya oo H.264/MPEG-4 AVC ah oo loogu talagalay mashruucyo tayadoodu sarreyso, oo hooseeya.
Isku xidhka kanaalada fiidyaha iyo adeegsiga isku xidhka fibre-ga indhaha waxay awood u siinaysaa fidinta fiidyowga xallinta ilaa 4K iyo xitaa 8K oo maanta oo dhan aad u dheer. Habkani wuxuu bixiyaa bandwidth ku filan oo aan la isku dhejin, xallinta sare ee DisplayPort 1.2 calaamadaha muuqaalka, kiiboodhka / mouse, RS232, USB 2.0, iyo maqal.
Tiknooloojiyadii ugu dambeeyay ee isku xidhka ayaa u oggolaanaya gudbinta aan lumin ee calaamadaha fiidiyowga ee xallinta 4K @ 60 Hz, qoto dheer oo midab 10-bit ah. Isku-buufin la'aanta waxay u baahan tahay bandwidth badan si loo gudbiyo calaamadaha fiidyowga laakiin waxay siisaa sawirro-cad-cad iyo hawlgal aan daahsoonayn.
Waxyaabaha ay tahay in la tixgeliyo marka la Geynayo Mashruucaaga Fiidiyowga-over-IP
Waa inaad isweydiisaa su'aalaha qaar ka hor intaadan bilaabin cilmi-baaristaada qaybaha si aad u dhisto codsigaaga AV-ga la xiriira:
Xalka cusub ee AV-over-network ma lagu dhex dari karaa topology-ga shabakadayda hadda, xitaa kaabayaasha 1G Ethernet?
Waa maxay tayada sawirka iyo xallinta ku fiicnaan doonta, oo miyaan u baahanahay fiidiyoow aan la isku dhejin?
Fiidiyow noocee ah ayaa soo geli doona iyo soo saarista ay tahay inuu taageero nidaamka AV-over-IP?
Miyay tahay inaan u diyaargaroobo heerka xiga ee weyn ee fiidiyowga?
Waa maxay dulqaadkaaga daahida? Haddii aad qorshaynayso inaad qaybiso fiidyowga kaliya (ma jiro isdhexgalka wakhtiga-dhabta ah), waxaa laga yaabaa inaad leedahay dulqaad daahitaan sare oo aadan u baahnayn inaad isticmaasho tignoolajiyada wakhtiga-dhabta ah.
Ma ku khasbanaan doonaa in aan taageero ilo badan oo isku mar ah goobta iyo isticmaalka internetka?
Ma jiraan wax arrimo ah oo waafaqsan qaybaha jira/dhaxalka?
FMUSER wuxuu kaa caawin karaa naqshadaynta nidaamka qaybinta AV- ama KVM-over-IP ee ku habboon baahiyahaaga gaarka ah. Iyada oo ku saleysan waayo-aragnimada ballaaran iyo faylalka alaabta gaarka ah, khubaradayadu waxay kugula talinayaan isku dhafka saxda ah ee qaybaha.
Xalalka fiidiyoowga FMUSER IP waxay awood kuu siinayaan inaad kordhiso P2P ama multicast HDMI fiidiyoow iyo maqal ilaa 256 shaashado shabakad ah, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon qaybinta nuxurka calaamadaha dhijitaalka ah ama HD fiidiyoowga iyo maqalka kale ee shabakadda Ethernet. Booqo Xalka beddelka AV-over-IP - bogga MediaCento si aad wax badan u ogaato.
Wax badan ka baro warqadeena cad - Gudbinta Fiidiyowga ee IP: Caqabadaha iyo Dhaqanka ugu Fiican.
Naga soo wac sales@fmuser.com si aad u dejiso demo bilaash ah mid kasta oo ka mid ah xalalkayaga.